मनोरन्जन Archives - Khabar Lekali
एजेन्सी । महिलाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै परिवर्तन भइहाल्छ । के कारण छ त्यसको पछाडी ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार नियमित सहवास गर्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि […]
एजेन्सी। छतबाट अनौठो आवाज आइरहन्थ्यो । ६ महिनादेखि यस्तो चलिरहेको थियो । एक दिन यसको जाँच गर्दा यस्तो वास्तविकता खुल्यो कि खुट्टामुनिबाट जमिन नै भासियो । घटना अमेरिकाको जर्जियाको हो । यहाँकी लीजा नाम गरेकी एक महिलाको घरबाट यस्तो चीज निस्कियो जसलाई देखेर जो कोही चकित परे । लिजाले जब पहिलो पटक यो घरमा आउँदा […]
काठमाडौँ । मोटी युवतीहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने भएको छ । मोटोपना भएका युवतीहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘सुपर प्लस साइज मोडल नेपाल’को तेश्रो सिजन आयोजना हुने भएको हो । मोडल सङ्स नेपालले ओमानियाको प्रस्तुतीमा ‘सुपर प्लस साइज मोडल नेपाल,२०२०’ सिजन—३ आयोजना गर्न लागेको हो । प्रतियोगितामा १६ देखि ५५ बर्ष उमेर समूहका विवाहित तथा अविवाहित महिलाहरुले भाग […]
‘बीच्च बीच्चमा’ गायक दुर्गेश थापालाई गीतले तिहार र देउसीको भावनामा ठेस पुर्‍‍याएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्दै
काठमाडौँ – गायक दुर्गेश थापा तिहारको मुखमा गाएको ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ गीतले विवादमा तानिएका छन् । तिहारको बेला बियर खाने प्रचार गरेका कारण र ‘ए निकाल गाँजा, खानुपर्छ आज’ भन्ने अंश कानुन सम्मत नभएकाले विवादमा आएका हुन् । कानूनी रुपमा प्रतिबन्धित गाँजा खानुपर्छ भन्दै गीत गाएपछि दुर्गेशविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी परेको बताइएको […]
जन्मजात हात खुट्टा नचलेपछि चितवनका भरत गुरुङले मुखले लेखेरै १२ कक्षासम्मको परिक्षा दिए ! जिब्रोले मोबाईल चलाउँछन् (भिडियो हेर्नुस)
उनलाई पहिलो पल्ट देख्ने जो कोही पनी नरोइकन रहन सक्दैन । उनका दुवै हातखुट्टा चल्दैनन् । हातका औला बटारिएका छन् । रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १६ निवासी स्थानीय जनजागृति माविमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत २१ वर्षीय भरत गुरुङ किताब र कापीका पाना जिब्रोले पल्टाउछन् र पढ्छन् । उनी मुखभित्र कलम राखेर ओठले च्यापेर लेख्छन् । […]
जिग्री–पाँडेविरुद्ध प्रहरीमा कपिराइटको उजुरी
काठमाडौं – हास्य टेलिश्रृंखला ‘सक्किगोनी’ को टिमविरुद्ध प्रहरीमा कपिराइटको उजुरी परेको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको हास्य टेलिश्रृंखला सक्किगोनीको टिमविरुद्ध मिडिया हबले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा कपिराइटको उजुरी दर्ता गरेको हो । यसअघि मिडिया हबले उत्पादन गरेको टेलिश्रृंखला ‘भद्रगोल’ का पात्रहरु अर्को टेलिश्रृंखलामा प्रयोग गरिएको भन्दै उसले प्रहरीमा उजुरी गरेको बुझिएको छ । प्रहरीले […]
“भ्वाईस अफ नेपाल”बाट रुदै बाहिरिएकी झुप्री भण्डारीलाई भेट्दा शिशिर भण्डारीले भने- “म हजुरको आँखाको ज्योति फर्काउन सहयोग गर्छु, दिदी” ! (भिडियो सहित)
मंगलसैन नगरपालिका–६ तारेखाकी ३० वर्षीया झुप्री भण्डारी जन्मेदेखि नै दृष्टिविहीन हुन् । ६ जना भाइबहिनीमध्ये माइली झुप्री आँखा नदेखे पनि घरायसी कामकाज भने सबै गर्छिन्। पानी ल्याउने, खाना पकाउने, घरमा सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर घाँसदाउरा गर्ने उनको दैनिकी हो। सबै काम गर्दा उनको साथी भने गीत नै हो । उनी जतिबेला पनि गीत गाइराख्छिन्। ‘जब आफुलाई […]
एजेन्सी। चीनमा एक महिलाले नयाँ मोवाइल फोन किनेपछि पुरानो फोन ११ वर्षकी छोरीलाई खेलाउन दिइन् । त्यस बेलादेखि त्यो फोन छोरीको खेलौनाहरुको एक हिस्सा बन्यो । छोरी दिनहुँ त्यो फोन खेलाउँथिन् । आमाबाबुले छोरीले फोनमा के गर्दैछिन् भन्नेतर्फ चासो दिएका थिएनन् । ६ महिनापछि उनीहरुलाई थाहा भयो कि छोरीले फोनमा के गर्दिरहिछिन् । छोरीको कर्तुतले […]
भद्रगोल टिमको नयाँ कोसेली “सक्किगोनि”,रक्षा र जिग्रिको प्रेममा मुन्नी भिलेन….(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौँ – भद्रगोलबाट बाहिरिएका जिग्री र पाँडेको टिमले नयाँ सिरियल “सक्किगोनि”निर्माण गर्ने भएका छन् । जिग्री र पाँडे लगायत बाहिरिएका २१ जनाको टिमले असोज २ गतेबाट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने भएका छन् । यो टिमले नेपाल टेलिभिजनसँग प्रत्येक विहीवार ८.५० बजेको समय समेत किनिसकेका छन् । भद्रगोलको पूर्व निर्देशकद्धोय कुमार कटेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे […]
Posted on September 11, 2019 September 23, 2019 Author admin	Comment(0)